Workshop - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Ubucwebe bufakelwe kahle i-CNC machining workshop, engahlangabezana namandla akhulayo wamakhasimende nezidingo zekhwalithi yemikhiqizo. CNC 4-eksisi machining futhi CNC 5-eksisi umshini Site izingxenye eziyinkimbinkimbi machining, kunciphisa clamping okuphindaphindiwe, nokuqinisekisa izinga lomkhiqizo; Ngokuphenduka nokugaya ukucubungula okuyinkimbinkimbi, izingxenye eziyinkimbinkimbi zingaqedwa.
I-CNC lathe machining workshop ifanele ukukhiqiza zonke izinhlobo zezingxenye zekhompiyutha ngokunemba, njengezingxenye zensimbi engagqwali ngokunemba, izingxenye ze-aluminium alloy precision, izingxenye zokucacisa zethusi; Umshini we-CNC lathe ungahlangabezana nemfuneko yemishini yemikhiqizo emikhulu ngokunemba, umshini we-lathe-othomathikhi ufaneleke kakhulu ekukhiqizeni izingxenye zokunemba shaft, ezinjengezingxenye ezinde zokunemba kushaft, ukunemba kokukhiqizwa kwesikulufu, njll.
Ngobubanzi bezinkundla zokucobelelana zemishini ezinemba ngokunemba kusuka ku-30T kuye ku-200T, singafinyelela izidingo zokunemba ngokunemba njengokufaka isitembu okuqhubekayo, ukugxisha ngejubane elikhulu, kanye nokushaya umfutholuketshezi, njll.
Isikhungo sokucubungula imodyuli yerediyetha
Ukucutshungulwa kwesigaba sokushisa kungumkhiqizo ophambili wenkampani iminyaka eminingi, inqubo yokukhiqiza evuthiwe, umugqa ophelele womhlangano, kanye nokulawulwa kwezindawo zokushisa eziyi-10 kulayini we-soldering low ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwemodyuli yesinki yokushisa.
Kunezinhlobo eziningi zama-radiator, kufaka phakathi ama-radiator we-circulation circulation kanye nama-radiator ochungechunge lwamanzi okusakaza. Imikhiqizo ephambili ibandakanya ama-radiator e-LED, ama-CPU radiator, ama-radiator ezokuphepha, ama-radiator kagesi, ama-inverter radiators, njll.